China Fused Silica ntụ ntụ Manufacturer na Supplier | Dinglong
Dinglong fused silica ntụ ntụ bụ eletriki gwakọtara akwa silica ntụ ntụ mepụtara na Dinglong Fangshan Industrial District anọ na nhazi ụlọ ọrụ. Ngwunye silica anyị a na-enweta dị na ọkwa na nkenke usoro na nkesa.
Ogologo nkwụsi ike dị elu na ọnụọgụ mgbasa ozi ọkụ dị ala
Emepụtara na Dinglong Fangshan Industrial District anọ na nhazi ụlọ ọrụ
Dị na ma ọkọlọtọ na omenala urughuru nha na nkesa
Dinglong gwakọtara silica ntụ ntụ bụ 99,98% amorphous. Fused silica powder na-agbanwe agbanwe onwu na-eme ka ọ bụrụ ihe dị iche iche maka ngwa ngwa, ngwa elektrọnik na ngwa ọrụ. A na-emepụta ngwaahịa silica ndị a site na usoro mgbaze ọkụ eletriki dị elu na-esote usoro ntụgharị na nha, na-achọpụta na ntụ ntụ dị iche iche na ngwakọta kemịkal, ngwugwu ngwugwu na oke nkesa. Anyị na-emepụta silica ngwaahịa na-arụpụtara na Fangshan Industrial District, ebe n'ichepụta Filiks na kachasị nke kwekọrọ na ntụkwasị obi. Dinglong kwenyere na ngwaahịa ndị a pụrụ ịdabere na ya nwere ike inyere ụlọ ọrụ aka inweta ahịa ndị isi ma wulite mmekọrịta miri emi na ndị ahịa anyị.
Dinglong fused silica flours dị na ma ọkọlọtọ na omenala urughuru nha na nkesa. Ndị ọkachamara anyị ga - arụ ọrụ iji bulie ngwa gị. Dinglong fused silica flours dị na 2,200 lbs. (1,000 kg) tote sacks.
A na-arụpụta ntụ ọka silica a na-arụ n'ụlọ ọrụ gbaara na Lianyungang, China. Site na afọ 30 nke nguzobe, Dinglong enwetala nkwado siri ike na teknụzụ ma nweta ahụmịhe dị egwu maka imepụta ezigbo quartz ihe. Anyị n'ichepụta Filiks kachasị nke kwekọrọ na ntụkwasị obi - na-enyere aka hụ na ngwaahịa na uru bara uru. Anyị kwenyere na ngwaahịa ndị a pụrụ ịdabere na ha nwere ike inyere anyị aka inweta ahịa ndị isi ma wulite ntụkwasị obi na ọbụbụenyi na ndị ahịa anyị.
Nke gara aga: Fused Silica ntụ ọka Refractory Materials
Osote: Fused Silica ntụ ọka
Amorphous Silica ntụ ntụ
Crystalline Silica ntụ ntụ
Nri Nri Silica ntụ ntụ
Micro Silica ntụ ntụ
Organic Silica ntụ ntụ
Silica Gel ntụ ntụ